China Wood chimbuzi chigaro, UF chimbuzi chigaro Vagadziri, PP chimbuzi chigaro Suppliers - Bofan
Universal huni chimbuzi chigaro
Round huni chimbuzi chigaro
Elongated huni chimbuzi chigaro
Yakadhindwa MDF chimbuzi chigaro
Decoration chimbuzi chigaro
Veneer chimbuzi chigaro
UF chimbuzi chigaro
Duroplast Urea UF chimbuzi chigaro
Yakadhindwa duroplast chimbuzi chigaro
Thermoplast Solid PP chimbuzi chigaro
Thermoplast yakadhindwa PP chimbuzi chigaro
Mahinji ezvigaro zvechimbuzi
2021 Bofan katalogi
PVC veneer chimbuzi chigaro
Isu tinopa PVC veneer chimbuzi chigaro.
Takazvipira kuchigaro chechimbuzi kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu, tinovimbwa neAmerican Standard, Walmart, OBIâ€¦ Zvigadzirwa zvako zvichagadzirwa nemutsetse wakafanana wekugadzira nemhando idzi nemhando yakanaka kwazvo uye mutengo.
Yakashongedzwa yakadhindwa MDF chimbuzi chigaro
Isu tinopa yakashongedzwa yakadhindwa MDF chimbuzi chigaro.
Kudhinda kunonakidza mukugadzirwa kwepamusoro-gloss
Adjustable fastening tekinoroji yekumisikidza kwakasiyana
MDF ine yakanyanya kuoma nzvimbo yakanyanyisa-kupwanya-uchapupu uye inodzivirira kukwenya
Inosanganisira yakazara gungano kit uye nyore kutevedzera mirairo yegungano.
OEM kudhinda kunogona kugamuchirwa.
Classic elongated huni chimbuzi chigaro
Isu tinopa classic elongated wood toilet seat.
Inokodzera saizi yakajairwa elongated toilet mbiya
3 majasi e lacquer anopikisa peeling uye kuputika
Anochinjika asina kutsvedza hinges
Inosanganisira zvese hardware
Inochenesa nesipo nemvura
Pamusoro akaiswa universal huni chimbuzi chigaro
Isu tinopa pamusoro akaiswa universal huni chimbuzi chigaro
MDF zvinhu izvo zvinokurumidza kutora tembiricha yemuviri
High glossy coating inoita kuti zvive nyore kuchenesa uye kukwenya kuramba.
Mapoinzi ekukwira anogona kugadziriswa kubva pa11 â€“ 19.5 cm sezvinodiwa
Matt dema universal huni chimbuzi chigaro
Isu tinopa matt dema universal huni chimbuzi chigaro WOODEN TOILET SEAT: Yakagadzirwa ne premium MDF, Anti-bacterial Protection Yapera, Yakasimba uye Yakagadzikana Kwehupenyu Hwakareba, Basa Rinorema Kutsigira Huremu hunosvika 150kg.
SOFT CLOSE TOILET SEAT: Yakapfava Inononoka Pedyo, Hapana Ngozi Yeruzha, Hapana Zvigunwe Zvidiki Zviri Kurohwa, Nyaradzo Yekushandisa
Yakatangwa muna 1995, Ningbo Bofan Sanitary Ware Co., Ltd., mumwe wevagadziri vezvigaro zvechimbuzi veChinese, anotevera nekusingaperi kuchengetedza kwezvakatipoteredza uye aesthetics uye anogara akazvipira mukugadzira zvigadzirwa zvehutsanana.
Iyo kambani yekugadzira base iri muguta rechiteshi -- Ningbo, China, inofukidza nzvimbo ye40,000 square metres. Mumakore makumi maviri apfuura, zvichibva pane zvakasiyana-siyana zvinodiwa nevatengi mumatunhu akasiyana dhizaini yakasarudzika uye masevhisi emhando, makumi emamiriyoni ezvigaro zvechimbuzi akatengeswa kunze kwenyika. Bofan ine yakapinza chigadzirwa mucherechedzo uye kugona kumhara kwehunyanzvi, yakatarisana nekugadzirwa kwechigadzirwa kunogona kuunza ruzivo rwemhando uye mufaro wemweya kuhupenyu. Iyo kambani ine yakasimba tekinoroji R&D kugona uye kusvika ikozvino, yakawana anopfuura 147 patents, ayo gumi nemanomwe ari patents ekugadzirwa.
Sarudza saizi yako yechigaro chechimbuzi uye chimiro
Zvinhu zvakasiyana-siyana zvechigaro chechimbuzi
Soft close hinge basa
Nzira yekusarudza chimiro chechigaro chechimbuzi?
Chigaro chechimbuzi chikamu chekuva nechigaro chikuru chechimbuzi. Kunze kwekutaridzika kune akawanda maficha uye maficha anofanirwa kutariswa pakusarudza chigaro chechimbuzi chakakwana cheimba yako yekugezera senge saizi, zvimbuzi zvese hazvina kufanana saka zvakakosha kuwana imwe inonyatsoenderana nehukuru hwako uye chimiro.
Heino maitiro ekusarudza chimiro chechigaro chechimbuzi.
Heino maitiro ekuyera saizi yechigaro chechimbuzi:
Iwe unozofanirwa kutora zviyero zvina kubva muchimbuzi chako: Hurefu, hupamhi, kureba uye chinhambwe pakati pemakomba ekugadzirisa.
1.Kureba, isa imwe mugumo wetepi yechiyero pakati pemakomba ekugadzirisa uye tambanudza kusvika kumucheto kwepamberi kwechimbuzi chako.
2.Nehupamhi, pima pani pane yakakura kwazvo.
3.Nehurefu, pima chinhambwe chiri pakati pemakomba ekugadzirisa netangi kana madziro.
4. Cherechedza chinhambwe pakati pemakomba ekugadzirisa 2 sezvo aya dzimwe nguva anogona kusiyana pakati pezvigaro.
Zvinhu zvakasiyana-siyana zvechigaro chechimbuzi.
Kugara uye kudziya, ine simba repamusoro uye yakakura inonzwaWood chimbuzi chigaro: Chigaro chechimbuzi chehuni chinogadzirwa nehuni hupfu, yakamanikidzwa kune density board. Yakafukidzwa nemateru akawanda ejasi rekupenda. Mhedzisiro yeiyi nzira yekugadzira chigaro chechimbuzi chehuni chine yakasimba uye ruvara rwakatsiga munguva.
Haibatike uye yakasimba, inorambira kuchembera uye kutsvuka, pamusoro payo pakatsetseka, nyore kuchenesa, ceramic feelUF toilet seatï ¼š thermosetting zvigaro zvinogadzirwa nekupisa kwekumisikidza kuumbwa kwehuwandu hweurea. Mhedzisiro yekugadzirwa uku inyaya ine inopenya, yakasimba pamusoro pechimiro chakafanana nechimbuzi checeramics.
Resilient, yakaumbwa-muruvara inoramba kupfeka, machipisi, uye stainsPP chimbuzi seatï¼š PP chigaro chechimbuzi (thermoplastic zvigaro) zvinogadzirwa nekuumbwa kwejekiseni. Kune mhando dzakasiyana dze thermoplastic material, asi inonyanya kushandiswa pazvigaro zvechimbuzi ndeye polypropylene. Mhedzisiro yeiyi nzira yekugadzira inyaya ine huremu hwakareruka, inopikisa nekufamba kwenguva.
Slow close hinge Basa:
Hinges dzakapfava-pedyo dzinotsigirwa ne hydraulic mechanism kuitira kuti pese apo gonhi rakavharwa nechisimba, michina inotora uye inoita kuti gonhi rivhare zvinyoro uye chinyararire, rinovharika chinyararire kazhinji mumasekonzi gumi nemashanu kusvika makumi maviri nemashanu. Kunyangwe kana magonhi akavharwa, hinji idzi dzinotora simba rakawandisa uye kuita kuti gonhi ribate furemu zvakanaka uye chinyararire.
Yakadhindwa huni MDF chimbuzi chigaro
Mhuka yakadhindwa MDF chimbuzi chigaro
Bamboo yakadhindwa MDF chimbuzi chigaro
Enameled Wood universal huni chimbuzi chigaro
WC sitz Europe universal huni chimbuzi chigaro